iTunes ihlaziywa ngokususa yonke imizila yeVenkile ye App | Ndisuka mac
iTunes ihlaziywa ngokususa yonke imizila yeVenkile ye App
UIgnacio Sala | | iTunes, Izaziso
Besithetha ngoku Ukwahlulwa okunokwenzeka kweTunes ngohlobo lwezicelo ezahlukeneyo. Kubonakala ngathi iApple ithathe nje inyathelo lokuqala kodwa hayi abasebenzisi abaninzi abanokuyithanda, kuba inkampani esekwe eCupertino ihlaziye usetyenziso lwe-ITunes kodwa ishenxisa naluphi na umkhondo weVenkile ye App. Ngale ndlela, asizokwazi ukuthenga usetyenziso ngokuthe ngqo kwi-MAC yethu, kodwa siya kuhlala sinyanzelwa ukuba sizenze kwi-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch yethu, ngokungathi sifuna ukuzifaka kwakhona.
Ukupheliswa kwecandelo leVenkile yeApple akuveli kwisicelo sesicelo esizimeleyo esivumela ukuba sifake kwaye sikhuphele usetyenziso. Ewe kunjalo, ukuba sinengxaki ngesixhobo sethu kuya kufuneka qhubeka usebenzisa iTunes ukubuyisela isixhobo sethu Ukuza kuthi ga ngoku, kodwa asizukuyisebenzisa ukufaka usetyenziso esizikhuphele kwi-Mac yethu.
U-Apple uthathe inyathelo lokuqala kule meko nge-iOS 9. Ukusukela oko yasungulwa, iApple ayisivumeli ukuba sikhuphele usetyenziso ebesilufakile kwi-iPhone yethu, kwi-iPad okanye kwi-iPod touch kwikhompyuter yethu nge-iTunes ukuze sikwazi ukubuyisela zonke izicelo xa sibuyisela isixhobo sethu kwasekuqaleni.
Le nguqulo intsha nayo ivumela ukuba senze ikopi yogcino yezixhobo zethu, ukhetho oluya kuthi ngokuhamba kweApple luphele lunyamalale kwaye inkampani inyanzele ukuba senze ikopi yezona zinto zisisiseko kwi-iCloud, into ngokuqinisekileyo engazukukholisa abantu abaninzi ngaphandle kokuba kube kanye, iApple isinika indawo yokugcina umthamo kwi-iCloud ngokokugcinwa kwesixhobo sethu.
Kodwa ayisiyiyo kuphela iVenkile ye App, kodwa Iincwadi zibuye zanyamalala ngokupheleleyo, Ukunyanzela abasebenzisi ukuba basebenzise usetyenziso olukhoyo kwindalo ye-iOS. Ukuba ufuna ukukhuphela kwakhona umdlalo okanye incwadi owayikhuphele ngaphambili, kuya kufuneka ufake isicelo apho ikhoyo, iVenkile ye App okanye iBooks kwaye wenze uphando ngegama. Okwangoku kuphela kwendlela i-Apple esivumela ngayo ukuba sifake usetyenziso okanye sikhuphele iincwadi, ngaphandle kokusebenzisa izicelo zomntu wesithathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » iTunes ihlaziywa ngokususa yonke imizila yeVenkile ye App
Esi sisigqibo sobuyatha esenziwe ngu-Apple!
Iintloni isizathu sokuba ndithenge i-iPhone ngokuchanekileyo sasilula ukungqamanisa iiapps phakathi kwezixhobo ... hamba, ndibuyela kwi-android
lonke ukhuseleko ebendinalo kunye ne-backups zam luzakusa. Ngaba kuya kufuneka ndibhatale ukugcina i-backups kwi-iCloud? yile nto bayifunayo? Ewe, andizukuyenza.
Ngenxa yohlaziyo olutsha, kuphakame umbuzo: Okwangoku akusekho khetho lokulawula ii -apps ezisuka kwi-iTunes, xa ndenza i-backup, ngaba iiapps endinazo kwi-iphone yam kunye nedatha yazo ikhutshiwe? Umzekelo: WhatsApp, luhlelo apho ndinolwazi oluninzi kwaye khange ndikwazi ukwenza ikopi kwi-iCloud kuba inobunzima obungaphezulu kwe-7 GB ngenxa yemali yedatha endinayo. Ke ukuba ndibuyisela i-iPhone yam kumzi-mveliso, kwaye bendenze ikopi yogcino kwiPC yam ngaphambili. Ngolu hlaziyo lutsha, ikopi isabandakanya zonke iiapps zam? Oko kukuthi, zibuyisiwe njengoko zazinjalo ngaphambili ngalo lonke ulwazi ezazinalo ???
UJosé Manuel sitsho
U-Apple ubuyela umva njengoononkala. Kule nqanaba, nokuba zilunge kangakanani na izicelo ze-iPhone kunye ne-iPad, ayizukufanelekela ukuthenga enye ukuba izakuba lula kwi-Android. Ndizakwenza ntoni ngala bendinawo kwaye khange alayishwe kwi-iPhone? Yiza, ubumdaka.
Amaxabiso kunye nokufumaneka kweApple Watch Series 3 eSpain
Eyona "hands-on" ilungileyo ye-iPhone X esiyibonileyo emva kokunikezelwa kwayo